Fahatsiarovana University of Terre-Neuve (Mun) - Fianarana any Kanada
Fahatsiarovana University of Terre-Neuve
Fahatsiarovana University of Terre-Neuve Details
City : St. Jaona
fanafohezan-teny : Mun
Créé : 1925
mpianatra (eo ho eo.) : 19000
Aza adino ny iaraho midinika ny Fahatsiarovana University of Terre-Neuve
Fahatsiarovana misoratra anarana ao amin'ny University of Terre-Neuve
Araka ny Terre-Neuve sy Labrador ny oniversite ihany, Fahatsiarovana Manana adidy manokana ny vahoakan 'ity faritany. Naorina ho fahatsiarovana ho an'ny Newfoundlanders izay namoy ny ainy tamin'ny fanompoana mavitrika nandritra ny Voalohany sy Faharoa World Ady, Fahatsiarovana University mitaona fitaomam-panahy avy amin'ireo sorona hanorotoro ny lasa rehefa hanampy antsika hanangana hoavy tsara kokoa ho an'ny faritany, ny firenentsika sy ny izao tontolo izao.
Isika dia multi-toeram-pianarana, multi-pifehezana, -bahoaka, fampianarana / fikarohana oniversite nanao ny tsara amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Miezaka isika ny hanana firenena sy iraisam-fiantraikany, raha fanatanterahana ny fe-potoana ara-tsosialy mba dia manome fahafahana hahazo oniversite fianarana ho an'ny olona tompon ny faritany sy handray anjara amin'ny ara-tsosialy, ara-kolontsaina, siansa sy ny fampandrosoana ara-toekarena ny Terre-Neuve sy Labrador sy tany an-dafin'i.
Fahatsiarovana manana mihoatra noho 18,500 Niely manerana ireo mpianatra efatra campus, ary efa ho 85,000 Alumni mavitrika manerana izao tontolo izao. Avy eo an-toerana mba fikarohana tetikasa Miezaka ny fiahiana-pirenena, Fahatsiarovana ny fiantraikany dia nahatsapa hatraiza hatraiza.
Fahatsiarovana University dia ho iray amin'ireo oniversite-panjakana kaja indrindra tany Kanada sy tany an-dafin'i, ary hanatanteraka ny adidy manokana ny vahoakan 'Terre-Neuve sy Labrador.
Fahatsiarovana University dia fiaraha-monina manontolo natokana ho zava-baovao sy tsara amin'ny fampianarana sy ny fianarana, fikarohana, scholarship, famoronana asa, asa fanompoana sy ny firotsahana-bahoaka.
Fahatsiarovana mandray ary manohana ireo mpianatra sy ny manam-pahaizana avy amin'ny manerana izao tontolo izao ary manampy ny fahalalana sy ny traikefa eo an-toerana, nasionaly sy iraisam-pirenena.
Excellence: Mampahery sy fampiroboroboana tsara amin'ny alalan'ny zava-baovao sy ny famoronana, hentitra sy ny pragmatisma enti.
Tsy Nivadika: Ny hoe manao ny marina sy ny etika amin'ny fifandraisana rehetra, foana ny avo indrindra ao amin'ny fampianarana fitsipika etika, fikarohana, -bahoaka andraikitra sy ny asa fanompoana.
Collegiality: Anjara ny hafa miaraka amin'ny fanajana, fisokafana sy ny matoky ny fanatratrarana tanjona iraisana, manana momba ny olona, idealy sy ny rafitra iray manontolo.
Inclusiveness sy ny fahasamihafana: Manaiky sy manao zavatra amin'ny andraikitra mba hiantohana ny fahasamihafana sy ny fahitsiana.
tompon'andraikitra: Ny hoe vonon-kandray ny isam-batan'olona sy ny vondrom-piarahamonina.
Accountability: Fanekena andraikitra zava-bitany ny tanjona iraisana sy ny tanjona.
Freedom sy Discovery: Fanohanana ny fahalalahana hanao fahalalana izay mifototra amin'ny tsirairay sy iombonana sampam-pitsikilovana, te hahafanta-javatra, hakingan-tsaina sy ny famoronana.
fankatoavana: manaiky, tangibly, ny lafiny rehetra amin'ny oniversite orinasa ao anatin'izany ny fampianarana sy ny fianarana, fikarohana, scholarship, famoronana asa sy ny andraikitra bahoaka.
Andraikitsika mba toerana: Tsiny sy manatanteraka ny adidy manokana ny vahoakan 'Terre-Neuve sy Labrador amin'ny fanohanana sy ny fanorenana fahaiza ho tsara izay:
Miresaka zavatra ilaina sy ny fahafahana ho an'ny Terre-Neuve sy Labrador;
Manao ny oniversite raharaha ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny firenena sy ny iraisam-pirenena dikany;
mamokatra ary mamonjy akademika fandaharana ny firenena sy iraisam-pirenena fakan-tahaka toa; ary,
manaiky ny fahafahana mavitrika aseho amin'ny alalan'ny iray multi-fonenan'ny mpianatra andrim-panjakana.
Andraikitsika mba mpianatra: Ny fahafantarana ireo mpianatra ho toy ny laharam-pahamehana ary manome ny tontolo iainana sy manohana mba ho azo antoka ny fianarana ambony sy ny fahombiazana manokana.
Interdisciplinary fiaraha-miasa: Fanohanana misongadina lohahevitra amin'ny fikatsahana izay nanapaka rehetra manerana vondrona akademika sy ny adiresy manan-danja sy zava-tsarotra ho an'ny fahafahana izay tsara indrindra Fahatsiarovana no napetraka mba hanorina nasionaly sy iraisam-pirenena fantatra fahaiza-.
maharitra: Ny fandraisana andraikitra amim amin'ny fomba izay ny tontolo iainana, ara-toekarena ary ara-tsosialy maharitra eo amin'ny fitantanan-draharaha, akademika sy ny fikarohana fandaharana.
Fahatsiarovana University manana efatra campus, samy amin'ny fotoany avy izy tsirony izany ary ho firavaky. Ny faritany ny renivohitry, St. Jaona, dia an-trano ny St. John ny toeram-pianarana izay manome ny manontolo akademika isan-karazany ny fandaharana ao amin'ny maoderina, an-drenivohitra toerana. Koa hita ao St. Jaona dia theMarine Institute, Kanada ny mpitarika foibe ny jono an-dranomasina sy ny fanofanana ary iray amin'ireo lehibe indrindra ny fanabeazana dranomasina toerana eto amin'izao tontolo izao. Grenfell Campus, miorina ao Corner Brook amin'ny Toerana mahafinaritra morontsiraka andrefan'i ny nosy, dia ny liberaly zavakanto sy ny siansa manokana fonenan'ny mpianatra ao amin'ny tontolo iainana sy ny zava-kanto tsara fandaharana.
Fahatsiarovana ny fampianarana sy ny fianarana any an-dafin'ny fahafahana manitatra faritanin'i Terre-Neuve sy Labrador. Ao amin'ny Fanjakana, ny Harlow Campus, Eny amin'ireo tanànan'i Old quaint Harlow, Essex, tsy manam-paharoa amin'ny toerana fitazanany izay hianatra, fikarohana, ary hijery ao amin'ny Vondrona Eoropeana.
Ary, Fahatsiarovana University ny 450 lavitra taranja fanabeazana ho azo tanterahina ny hanitatra ny efitrano fianarana mihoatra sisintany, manampy anao ny manao fikarohana akademika na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Licence ny fitantanan-draharaha
Licence ny varotra (mpiara-OP)
Licence iraisam-pirenena ny fitantanan-draharaha
Mpiara licence na ny zavakanto sy ny licence ny varotra (mpiara-OP)
Licence ny fanabeazana (Kilonga / fototra) toy ny ambaratonga voalohany
Licence ny fanabeazana (Kilonga / fototra) toy ny ambaratonga faharoa
Licence ny fanabeazana (kafa / faharoa)
Licence ny fanabeazana (kafa / faharoa) conjoint amin'ny diplaoma amin'ny teknolojia fanabeazana
Licence ny mozika conjoint amin'ny licence ny mozika fanabeazana
Licence ny mozika fanabeazana (toy ny ambaratonga faharoa)
Licence ny fampianarana manokana
Licence ny injeniera
Licence ny kinesiology (CO-OP misy)
Licence ny fialam-boly (CO-OP misy)
Licence ny fanabeazana ara-batana (CO-OP misy)
Humanities sy ny Siansa Sosialy
Mpiara licence ny zavakanto sy ny licence ny varotra (mpiara-OP)
Doctor ny Medicine
Licence ny mozika
Licence ny fitaizana be antitra
Lisansy amin'ny taranja siansa (levitra)
Licence ny asa ara-tsosialy
Fahatsiarovana University of Terre-Neuve dia tsy anaram-piangonana oniversite ao St Jaona, Terre-Neuve. Fahatsiarovana University nanomboka toy ny Fahatsiarovana University College (mục), izay nisokatra tamin'ny Septambra 1925 amin'ny fonenan'ny mpianatra ao amin'ny Parade Street in St. Jaona.
Ny voalohany dia filoha J. L. Paton. Tsy nanatitra ny roa taona voalohany amin'ny oniversite fianarana. Mục ny fisoratana anarana voalohany dia 57 mpianatra, miakatra ny tampon'isan'ny ny 400 ao amin'ny taona 1940. In 1933 fa natambatra amin'ny mifanila Normal School, ary nandray andraikitra fanofanana mpampianatra. Nandritra ny taona tany am-boalohany College ny be dia nahazo fanohanana avy amin'ny Carnegie any New York Corporation.
Ny kolejy dia naorina ho fahatsiarovana ho an'ny Newfoundlanders izay efa namoy ny ainy tao amin'ny asa fanompoana mavitrika nandritra ny ady lehibe voalohany. Izy io tatỳ aoriana naverina notokanana mba hanodidina ny faritany ihany koa ny ady maty ny Ady Lehibe Faharoa. Alan Beddoe namorona ny akanjo ny fitaovam-piadiana ho amin'ny Fahatsiarovana University of Terre-Neuve. Ny lahatsoratra-Confederation avo governemanta ny toerana misy Fahatsiarovana University College ho tanteraka toerana oniversite tamin'ny volana Aogositra 1949, fanovana anarana ny fikambanana ho Fahatsiarovana University of Terre-Neuve. Fahatsiarovana University dia naorina ny Fahatsiarovana University Act.
Ny fisoratana anarana ao amin'ny Mun voalohany isan-taona dia 307 mpianatra. In 1961, fisoratana anarana rehefa nitombo 1400, Mun niala Parade Street ho any amin'ny toerana ankehitriny amin'ny Elizabeth Avenue (Main Campus).
On 8 March 1965, ny governemantan'i Terre-Neuve saram-pianarana maimaim-poana dia nanambara ho an'ny mpianatra taona voalohany ao amin'ny Fahatsiarovana nisoratra anarana University in St. Jaona. Ny Faculty of Medicine ny Fahatsiarovana Oniversiten'i Terre-Neuve dia naorina teo an 1967, ary ny voalohany ireo mpianatra tafiditra amin'ny 1969. Niaiky toy izao eo ho eo izany 80 mpianatra ho ao an-M.D. fandaharam-potoana isan-taona, ary koa manolotra M.Sc. and Ph.D. fandaharana.
Mun mihazona ny mpianatra Anjerimanontolo tao amin'ny Harlow, Angletera ary nivoha ho mpianatra ao 1969. Fonenan'ny mpianatra ity no toerana malaza ho an'ny fiofanana in Fampianarana, ary ankehitriny dia manolotra bola taranja, asa iombonana, sy ny fiofanana ao amin'ny faritra maro. Ny fonenan'ny mpianatra eo ho eo accommodates 50 mpianatra.
Fahatsiarovana nametraka ny Institut Frecker in St. Pierre in 1973, mba hanatitra ny anankiray enim-bolana frantsay-batisa fandaharana. Dia mitoetra ao anaty trano iray omen'ny ny Arsidiosezin'i St. Pierre mandra- 2000. Fantatra ankehitriny hoe ny Program Frecker, amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka amin'ny FrancoForum, ny teny fampianarana toerana ny fananan'ny governemanta ny St. Pierre. Ny fandaharam-potoana dia ampahany tohanan'ny ny fitondrana any Kanada sy Terre-Neuve sy Labrador.
Tamin'ny Septambra 1975 ny fonenan'ny mpianatra tao Corner novohana Brook; dia anarana voalohany Sir Wilfred Grenfell College in 1979 dia anarana indray ao 2010 araka ny Grenfell Campus, Fahatsiarovana University of Terre-Neuve. amin'izao fotoana izao 1300 mpianatra manatrika Grenfell, izay manome mari-pahaizana fandaharana feno in maro fitsipika, anisan'izany ny tsara Arts, ary ny ampahany fandaharana, izay azo tanteraka amin'ny Main Campus, amin'ny foto-kevitra maro hafa.
In 1977, ny Fahatsiarovana University of Terre-Neuve-pampianaran'ny Television Center fampiharana ny Telemedicine tetikasa.
In 1992, ny misahana ny Jono sy ny Teknolojia ao St Marine. Jaona lasa mpikamban 'Mun tahaka ny Jono sy Marine Institute of Fahatsiarovana University of Terre-Neuve. Amin'izao fotoana izao no atao hoe ny Marina Institute of Fahatsiarovana University of Terre-Neuve. Manolotra mari-pahaizana na mari-pahaizana sy ny tsy fandaharana.
In 2008, ny fanaramàna ny oniversite dingana ho an'ny Narahi-filoham-pirenena eo ambany fanaraha-maso ho tonga fitsabahan'ny politika amin'ny faritany ny Minisitry ny Fampianarana, Joan Shea.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Fahatsiarovana University of Terre-Neuve ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Fahatsiarovana University of Terre-Neuve ao amin'ny Map
Photos: Fahatsiarovana University of Terre-Neuve ofisialy Facebook
Fahatsiarovana University of Terre-Neuve Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Fahatsiarovana University of Terre-Neuve.
Fahatsiarovana University of Terre-Neuve St. Jaona